Uyini lweqhwa? Abeve akhiwa futhi lokho siqukethe?
Tiny ice zinhlayiya amafomu eyinkimbinkimbi eyingqayizivele, okuyinto ngesandla esivulekile businikeza ebusika - yilokho amakhekheba eqhwa. Imfihlakalo lesi simangaliso emangalisayo bemvelo Sekuyisikhathi eside bakhangwa bebuza izingqondo. Kanjani lesi simanga, ukuthi imiphi imithetho angaphansi ngokuvumelana esiqinile amafomu abo nokuthi kungani zahlukahlukene ngakho - mibuzo zizozama ukuphendula kule athikili.
Umlando cwaningo zamakhekheba eqhwa
Sekuyisikhathi eside ososayensi wazama ukuthola ukuthi yini ezokwenzeka eqhwa ukuchaza isakhiwo eziyinkimbinkimbi futhi evumelanayo izakhiwo zabo. Elokuqala imidwebo yabo kusukela imvelo abenziwe Okhahlamba umcwaningi Mangus e 1555.
Ekuqaleni XVII ekhulwini usosayensi German Iogann Kepler wathola ukuthi cishe bonke eqhwa kukhona zinhlayiya olunezinhlangothi. Uye ishicilelwe isihloko amaphepha isayensi.
Eminyakeni 1635-1637 umbuzo yini eqhwa unesithakazelo sezibalo French Rene Dekarta. Wachaza kubo ibukeke iminduze, roses amasondo ngamazinyo eziyisithupha. Uye eshicilelwe imidwebo yabo, okuyinto ungabona ngisho eqhwa ngamazinyo eziyisishiyagalombili noma nambili, zemvelo kakhulu kuyaqabukela.
Ngo-1885, usosayensi American Wilson Bentley izithombe eqhweni crystal lokuqala ngesibonakhulu. Iminyaka ecishe ibe ngamakhulu amahlanu eminyaka, iqoqo kwakhe kwase 5000 yezithombe ezifanayo.
Japanese Nakaya Ukitiro - physics - khona kabi wahlanganyela izifundo zendlela eqhwa akhiwa futhi kungani bonke zihlukene kangaka, eminyakeni engu-30 ngekhulu leminyaka lamashumi amabili. Wayengumuntu ngezigaba zabo kuqala zesayensi, futhi wasungula indlela ukwenziwa iqhwa yokufakelwa. Igama usosayensi ngokuthi i-Museum of ice neqhwa ukuthi itholakala e-Japan, esiqhingini Hokkaido.
Ngo-1955, Russian A. eqhwa Overseas yizigaba eziyisishiyagalolunye, kanye 48 zilwane. Phakathi kwabo - "onogwaja", "inaliti", "ipuleti", "Amabha", "cuff izixhumanisi" nabanye.
American Kenneth Liebrecht abahlala kulezi zinsuku, 'wayegcwele zamakhekheba eqhwa Handbook. " Esegunjini, iqhwa zinhlayiya etshalwa okwenziwe ngayo ngisho kungenzeka ukunikeza ijamo design.
Indlela eqhwa akhiwa
Snowflakes akhiwa amanzi umusi. amaconsi Amancane lokushisa ongaphakeme kanye nomswakama eliphezulu iwukufingqwa ngamafu. Babhekene zothuli sintanta emoyeni, futhi uhlanganyele nabo. Ngakho, ukuthi zazo ziqukethe eqhwa, - a zothuli (crystal nuclei) futhi izinhlayiya ezincane ice, kancane kancane lumila endaweni ezungeze ngamunye wabo.
Njengoba lweqhwa esizayo iwela emhlabathini, sahlanganyela zonke zinhlayiya entsha ice, kuyilapho esaziwa ezakheke ngokugqamile olunezinhlangothi. izingxenye convex we crystal sikhule ngokushesha.
Lapho ehlangana endleleni ngamaconsi supercooled, lweqhwa uyaqhubeka ukhula. Ukufinyelela mass esibucayi, uwe phansi - phansi.
Endleleni akhiwa zeqhwa nokwakheka kwalo ukuthi ikhula njani, ithinta izici eziningi. Okubaluleke kakhulu kubo - Noma alternation of lokushisa ngongqimba ezahlukene emkhathini, iqhwa zinhlayiya kuthiwa wenza ukuba kwenzeke.
Ngo lomoya, amakhekheba eqhwa kushintsha njalo. Ezindaweni ezibandayo zinhlayiya ukukhula usheshisa, zikhula kakhulu ubude. Kukhona, lapho kukhona umoya ngaphezulu elifudumele, "imisebe 'kakhulu yinde, kodwa eqala ukukhula ngobubanzi. Ukwazi ukuthi lweqhwa, ungakwazi kalula uchaze ukuthi kungani, kuye ngokuthi izimo sezulu endaweni ethile ngokuvamile uwela ejwayelekile uhlobo wakhe kweqhwa.
Ngakho, esifundeni aseBaltic nasengxenyeni emaphakathi neRussia ngo sezulu ezolile, iqhwa ngokuvamile iza ngesimo ishq esikhulu "Fluffy", okuyinto ube nohlobo eziyinkimbinkimbi branched. Nge ipheshulwa eqinile umoya ongaphakeme lokushisa eqhwa nqwamana nomunye, futhi sidilike ku izingcezwana esihle iwe phansi. Uma ushaya amane-degree yamakhaza, nascent ice zinhlayiya ngeke fihla phansi "idayimane uthuli". Futhi maphakathi Yakutia kubanda ngokuvamile bakhala mncane "inaliti" ice.
Lapho iqhwa uwela
kwakhiwa Snow is esimweni lapho izinga lokushisa komoya ingezansi degrees ezimbili Celsius. Lo mbono wokuthi le thermometer izindlela awe ngezansi zero - uyinganekwane. Kulokhu, uqala ukuze kuncibilikiswe iqhwa seliwile. Nokho, kule nqubo air lokushisa ezindaweni lapho kukhona KULETHA ngempela incipha.
Olusindayo iqhwa ishq bawe uhla degrees zero ezimbili. Kodwa uma izinga lokushisa iqala bona ahlule ke, lokho siqukethe eqhwa - zinhlayiya ezincane ice, ngeke sisondela ngokungenakuvinjelwa ancibilike. Kulokhu, cishe, kufanele silindele falling iqhwa ezimanzi, ngisho nemvula.
Igama izibankwakazi. Izithombe anamagama
Honey bee zasendle noma yasekhaya. Honeybees: Izinhlobo
Amazing zohlobo yamakati amakhulu
Krasnodar: Kuban emfuleni Pshekha, Mhlophe, IIF wakhe
Izinhlobo ubisi amakhowe, isithombe
Amazing cherry Chinese
Hyperopia medium noma izinga eliphakeme hyperopia ukulungiswa. Hyperopia kancane kuwo womabili amehlo
"Azitroks": ukubuyekezwa. Amathebulethi "Ama-Azitroks": izinkomba
Yini okufanele ugqoke ngengubo ebusika nasekwindla?
Lapho ungakwazi ukubhukuda ngoNovemba: imibono namaholide
Ukuphefumula kwe-Cheyne-Stokes: izimbangela, i-pathogenesis, ukwelashwa
Makeup ne bezinto: ungasifaka kanjani isicelo futhi awubukeki inhlamba
Ezinye spray pepper ngenhloso yokuzivikela kungcono? Isilinganiselwa igesi cartridges ngenhloso yokuzivikela
Imincintiswano ngoba intsha ukusiza ukumambula ubuntu babo siqu
Kuvulandi Cosy. kuvulandi ukuklanywa efulethini. Ukwenza balcony ngaphakathi
Cystitis emva kocansi. Kungani-ke kwenzeka nendlela yokugwema kuso?